Sublime မှာ မြန်မာစာ ရိုက်လို့မရလို့ပါ - MYSTERY ZILLION
Sublime မှာ မြန်မာစာ ရိုက်လို့မရလို့ပါ
February 2015 in Daily Life
Setting Font Face မှာ Myanmar3 တော့ပြောင်းကြည့်ပြီးပြီ
sublime myanmar unicode
sublime က မြန်မာလို အဆင်မပြေပါဘူး။ မြန်မာလိုရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ Github ရဲ့ Atom.io Editor ကို ပြောင်းသုံးကြည့်ပါလား။
okay bro. Thanks Q ;p
how can I call html & php hint from ATOM Text Editor in Windows. ko saturngod
ကျွန်တော် က Mac သုံးတော့ Mac မှာတော့ Control + Space ဆိုရင် hint box တက်လာပါတယ်။
တခြား auto complete plugin တွေလည်း စမ်းကြည့်လို့ရပါတယ်။ https://atom.io/packages/autocomplete-plus